Siberian State University Medical - MBBS Medicine Study in Russia
Medical Siberian State University Details
gaabinta : SSMU
Ha iloobin in aad wada hadlaan Siberian State University Medical
Qor at Siberian State University Medical
Siberian University Medical State Tababar jiilka xiga ee dhakhaatiirta by samaynta cilmi-caafimaad oo tayo sare leh iyo iyadoo la siinayo waxbarasho heer sare ah.
dhidibada loo aasay 1878, Siberian State University Medical waa mid ka mid ah dugsiyada caafimaadka ee Russia ugu fiican u yaqaan oo heer sare ah sumcad baqdin ay heerkiisa ugu sareeya jirka waxbarasho iyo sayniska, markaasay dhakhtarradii khibrad leh oo magacyadoodiina waa dunida-caan. Mid ka qalin yihiin labada madaxweyne ee Academy Ruush of Medical Science, 25 xubnaha associate ee Academy Ruush of Medical Science, 42 aqoonyahano.
Siberian State University Medical’mission s muhiimka ah waa in la horumariyo daryeelka bukaanka iyo caafimaadka dadweynaha ee Ruushka waxbarid, cilmi-baarista iyo heer caafimaad.
University ayaa lagu higsanayaa in hagaajinta tayada nolosha iyo caafimaadka ee dadka iyada oo loo marayo hal-abuurka ee waxbarashada, cilmi-baarista iyo daryeelka bukaanka bixiya tababarka tayada sare-, fursado waxbarasho iyo cilmi ardayda.
in ka badan 5000 ardayda
ardayda ka 47 gobollada Russia
ardayda ka 13 dalalka shisheeye
80% ardayda oo dhan ka Russia
12% ardayda ajinebiga ah
ka badan 80% of awood waxbarasho ay yihiin culimada sayniska
15% waxbarashada loo shaqeeyaha oo maal-, Inc. 30% nidaamka daryeelka caafimaadka Tomsk
72 000 ardayda jaamacada ee 120 Jinsiyadaha ee Tomsk
Siberian State University Medical waxaa kaalinta in hogaanka 3 Dugsiyada caafimaad iyo in sare 30 sare waxbarasho hay'adaha top 30 hay'adaha waxbarashada sare ee Ruushka (2015).
Sanad SSMU waxay bixisaa waxbarasho in ka badan 5 000 ardayda ka dhan qeybo ka mid ah Russia iyo CIS gobolka iyo sidoo kale dalal badan oo ajnabi ah (Germany, Haiti, Latvia, Lithuania, Cyprus, Nigeria, Malaysia, Hindiya, Mongolia). Jaamacadda ayaa ku faani kartaa in ka badan 80% awood tacliinta la darajo tacliimeed (375 MDs, DMedSci). In ka badan 60 000 dhakhaatiirta iyo farmashiistayaasha ayaa ka qalin jabiyay Jaamacadda ah sanadihii la soo dhaafay; ka badan 40 000 Khubaro ayaa beencertified.
SSMU waxay siisaa ardayda waxbarashada exellent iyo shahaado caafimaad oo sax ah.
Siberian University Medical State waxay bixisaa jawi ka duwan waxbarasho ee ardayda xiiseynaya xirfadaha daryeelka caafimaadka sida dhakhaatiirta ama saynisyahano sahaminta baaritaan caafimaad iyo cilmi-.
Siberian State University Medical waa mid ka mid ah jaamacadaha caafimaadka yar ee Russia ay isbitaalka jaamacadda u gaar ah, xarumaha cilmi-baarista iyo laboratories, matxafyada jidh ururinta gaar ah, Maktabadda ugu weyn ee Sayniska Caafimaadka ee Siberia iyo tas-hiilaadka kale oo badan.
SSMU qalin yihiin xirfadlayaal aqoon sare leh.
aqoon ayaa helay inta lagu guda jiro waxbarashada la dhex geliyaa dhaqanka ee mid ka mid ah laba xarumood istuuray tababar la aqoonsan yahay Yurub ee Russia. Waxaa ka mid ah SSMU qalin yihiin dhakhaatiirta ee hormuudka ka ah rugaha Ruush iyo dibadda: in ka badan 700 dhakhaatiirta, 42 aqoonyahano, Wasiirka Caafimaadka ee Ruushka, Wasiir ku-xigeenka Waxbarashada ee Ruushka.
qalin University waa in baahida weyn ee dalka oo dhan. qalin Our shaqeeyo dhammaan gobollada Russia, CIS, Germany, Norway, Israa'iil, Maraykanka, Canada, France, Belgium, South Korea, Sweden, Czech Republic ee.
Waxbarashada SSMU Waa xiiso leh oo farxad leh.
Siberian State University Medical waxay bixisaa fursado badan oo loogu talagalay kuwa raba si loo kobciyo nolosha ardayga hawlaha kala duwan ee ay. Ardayda ka qayb qaadan kartaa madadaalada sanadka oo dhan, oo ay ku jirto kubada cagta, tennis, basketball, dabaasha ee xagaaga, ama barafka iyo kobaha ee xilliga qaboobaha.
Tiro ka mid ah kooxaha xiisaha ku salaysan iyo ururada ardayga waxaa laga heli karaa at University ee: a bulshada sayniska ardayga, kooxaha iskaa wax u qabso, Ingiriisi kooxda hadlaya, iyo kuwo kale oo badan.
Dhakhaatiirta Caafimaadka (therapy, qalliinka, uurreyda iyo umulaha iyo cudurada)
Daawo-Biology (Kiimikada noole, biophysics, cybernetics caafimaadka)
Tacliinta Sare for Kalkaaliyayaasha
Tababarka Sare iyo Horumarinta Xirfadaha (wadashada waxbarashada)
Maamulka iyo Dhaqaalaha ee Daryeelka Caafimaadka
Psychology Clinical iyo Psychotherapy
1878 -Alexander II aasaasay Tomsk Imperial University sida Kulliyadda Daawada
1888 June, 22 -Waxaa Taariikhda rasmiga ah ee furitaanka
1930 -Waxaa Kuliyada Daawada of Tomsk State University ayaa waxaa diinta / habayn si Institute Medical Tomsk
1992 Machadka Caafimaadka -Tomsk helay xaaladda jaamacadda iyo magaceeda ilaa Siberian State University Medical bedelay
Siberian State University Medical waa mid ka mid ah jaamacadaha caafimaadka taasoo keentay in Russia. Its taariikhda taariikhda in ay dib ugu 1878, markii Alexander Emperor ee II aasaasay jaamacadda ugu horeysay ee ka mid ah Asian of Russia. Imperial Tomsk University furay 1888 oo leh hal awood keliya - Kuliyada Daawada.
Aasaasay ka badan 135 sano ka hor, jaamacada waxaa markii hore la sameeyey sida cilmi ah iyo xarun waxbarasho. Muddo sanado ah, University ayaa noqotay mid ka mid ah waxbarashada ugu fiican, kaxeynayo sayniska iyo caafimaadka ee Russia yahay tababar iyo shahaado of xirfadlayaasha caafimaadka berrinkii qaliin, daawada gudaha, Caruurta, cudurada, histology, Farmashiiste, ayidhi iyo kuwo kale oo badan.
SSMU maanta KU JIRO 7 Caqlina, Caafimaadka iyo Pharmaceutical College, Central Research Laboratory, 8 xarumaha cilmi-baarista, laboratories cilmiga iyo cilmi maadooyinka iyo xarumo caafimaad oo u gaar ah, saddex Matxafka jireed ururinta gaar ah iyo maktabad caafimaad cilmiyeed ugu weyn ee gobolka.
Sanado badan Siberian State University Medical ayaa ka mid ah shan jaamacadaha caafimaadka top hoggaamineed ee Russia sida ay Wasaaradda Waxbarashada ee Ruushka. Jaamacadda diiwaangeliyo ka badan 5000 dadka sannad kasta. Laga soo bilaabo sannad ilaa sannad jiro koror joogto ah in tirada ardayda soo socda si ay u bartaan in ka Siberian State Medical University ka gobollada kale ee Russia, CIS iyo dibadda
Ma rabtaa wada hadlaan Siberian State University Medical ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Siberian State Medical on Map
Photos: Siberian State University Medical rasmiga ah Facebook
dib u eegista University Medical Siberian State
Ku biir si ay ugala hadlaan of Siberian State University Medical.
Moscow Institute of Physics iyo Technology Moscow